VOKATRA HIRAGASY :: Namoaka ny «Tiako ianao fa saingy indrisy » ny tarika Rainitelo • AoRaha
VOKATRA HIRAGASY Namoaka ny «Tiako ianao fa saingy indrisy » ny tarika Rainitelo
Takon’ny resa-pifi­dianana. Somary mangingina ny fitetezam-paritra ataon’ny tarika mpanao hiragasy. Na izany aza, misy ny vokatra azo atolotra.
Fantatra fa nivoaka nanomboka tamin’ny talata teo ny rakitsary (DVD) “Tiako ianao fa saingy indrisy”, sanganasan’ny tarika Rai­nitelo, avy any Andohavary. Sambany eo amin’ny tantaran’ny hiragasy io vokatra io. “Tamin’ny alalan’ny fitaovana raitra sy arifomba no nanatanterahana azy”, araka ny fanazavana nataon’i Dadafara, mpitantana ny LT Production nisahana ny famokarana ity rakikira vaovao ity.
“ Nahatratra roa ambin’ ny folo ny “caméras” nampiasaina…nifanaraka tamin’izany ihany koa ny kalitaon’ny fandraisam-peo”, hoy izy. Nohazavainy tamin’izany fa ny hisarihana ny olona rehetra hitia sy hankamamy ny hiragasy no anisan’ny tanjona sy niteraka izao fandraisana sary sy feo anisan’ny faran’izay raitra izao. “Teny an-kianja mihitsy no nandraisana ny feo sy ny sary fa tsy tany anaty efitrano mba hahazoana mihanoka tsara ny hakanton’ny hiragasy sy ny fitaizana azo avy aminy”, raha ny nambarany hatrany.
Nomarihin’i Dadafara LT Production fa anisan’ny fanamby apetraka ny hitondra fanatsarana hatrany ny sehatry ny hiragasy. “Fafana tanteraka ao anatin’ny eritreritry ny olona ilay fisainana manao hoe tsy mahavita zavatra tsara loatra ny tontolon’ny hiragasy. Hamafisinay tante­raka amin’ity rakitsary misy ny sanganasan’ny tarika Rainitelo ity fa manara-penitra ary sahy miatrika ireo heverina fa vokatra manana kalitao tsara ny hiragasy”, hoy ihany izy.
Ho fiarovana amin’ny piraty sy ny mpanao hosoka ary ny dika mitovy, ny “Sera­sera Hiragasy” eny Isotry ihany no mamoaka sy manaparitaka ny vokatra, raha ny fanazavan’ny tompon’ andraikitra.
Vono olona Lehilahy maty voatifitra teo amin’ny lohany
TOETR’ANDRO :: Lasa rivo-doza «Cilida» ilay andro ratsy ao avaratra-atsinanan’ny Nosy